Ambrosia tripartite: nkọwa, foto, ụzọ nke igbo ahihia na mba ahụ - Mkpụrụ ubi - 2019
Kedu ka ambrosia si yie na ihe dị njọ?
Ambrosia maara nke ọma na ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'oge okpomọkụ ọ bụla site na nhụsianya na-egbu ahụ na pollen nke osisi. Nke a bụ onye nnọchiteanya nke ezinụlọ Astrov, na-agụnye ụdị 41. N'ime oge anyị, anyị na-amụba anọ n'ime ha. Banyere otu ụdị - ụdị njem atọ - ambrosia tripartite - ga-atụle n'isiokwu anyị.
N'ala nna na osisi
Otu esi emeso ahihia
Na mmalite nkebi
Na saịtị "arọ"
Na ambrosia, tripartite nwere ihe dị elu ogologo stalk, na-eru 1.5 mita n'ịdị elu na 3-4 cm n'obosara. Usoro mgbọrọgwụ ejikọrọ, dị mkpa. Akwụkwọ ndị ahụ dị iche iche, anọ, na ise, nke dị n'ogo n'ogologo.
Osimiri na-amalite na mbubreyo July ma na-adịgide ruo n'October. A na-akpụpụta ụmụ okooko osisi n'ụdị brushes ruo 10 cm n'ogologo n'ogo nke ị ga. Nwanyi - egosi na axils nke epupụta. Osisi ndị dị ntakịrị, ruo 1 cm na dayameta, odo. Mgbe okooko, mkpụrụ osisi na-agbụ n'ụdị obovate seedlings nke isi awọ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ogologo nke 0.5-0.6 cm na obosara nke 0.3-0.4 cm.
Ị ma? Aha Latin aha ambrósia sitere na okwu Grik, nke pụtara nri nke chi dị iche iche na ihe mmanu esi ísì ụtọ nke chi ndị Grik jiri mee ihe maka ịkọchapụta anwụghị anwụ..
A na-ewere North America dị ka ebe ọmụmụ nke ambrosia. Na Europe, ọ bịara na XIX narị afọ. Ma aha ọjọọ ya enweelarị na narị afọ nke iri abụọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị mmadụ chọpụtara na ahihia ngwa ngwa weghaara ókèala ọhụrụ, ọ na-esi ike ịdọrọ, ọ na-ebutekwa pollinosis.
Ambrosia na-enwe mmasị ịbanye n'akụkụ okporo ụzọ, na ala ahịhịa, na nso okporo ụzọ ụgbọ oloko, na ala mmiri, n'akụkụ iyi mmiri. Ke adianade do, ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ubi, ubi, ubi, ogige ntụrụndụ. A na-achọta ya n'ime ime obodo na n'obodo ukwu.
Ndị na-akọ ubi na ndị na-elekọta ubi ga-aba uru iji mụta otú e si tufuo quinoa, mgbọrọgwụ, gbanyụọ, mpi, purslane, dandelions n'ógbè ahụ.
Mgbasa ngwa ngwa nke omenala ahịhịa a bụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya:
okpomoku zuru uwa, nke ebe ugwu ugwu di kwa mma maka uto nke ambrosia;
mgbanwe nke omume ugbo nke mba ụfọdụ;
ihe omuma aku, nke sitere na nke a na-ahapụ ala ndị a na-akọbeghị na ha na-agbapụ;
ebibi ndi mmadu.
Taa, ambrosia dị na Europe, n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, Caucasus, Eastern Siberia, North na Central America, na Africa.
Ị ma? Ambrosia bụ osisi siri ike. Mkpụrụ ya na-ejigide germination, dị ka ụfọdụ data, ruo afọ 40, dị ka ndị ọzọ - maka 100 afọ.
Ambrosia na-emerụ nnukwu ala ubi na osisi na-eto eto na-esote ya, nakwa maka ahụike mmadụ.
Nke mbụ, ọ na-asọ ma na-ekpocha ala. Iji mee ka ala ghara ekwesighi maka osisi na-eto eto, ambrosia na-ewe nanị afọ ole na ole. Nke abuo, ahihia a bu ezigbo mmiri ma nwee mgbọrọgwụ siri ike, nke na-etolite 4 mita miri, ya mere ọ na-etinye otutu mmiri si n'ala, na-ahapụ ihe oriri na ọka ọka na-enweghị ezigbo nri. Ozokwa, ya na obosara ya anaghị ekwe ka ìhè anyanwụ rute ha, nke na-emetụta n'ụzọ dị njọ na mmepe nke osisi na arụpụta ọrụ ha.
Nsogbu ndị a na - esite na mkpọsa nke ikesa ahịhịa:
ebelata ala ala na-eme nri;
ihichapu humus oyi akwa;
ihe si na mpaghara ụfọdụ nke osisi a na - akọ - sunflower, ọka, mkpo, buckwheat, na ndị ọzọ bụ ahịhịa nke mbụ ga - emetụta;
nsogbu na owuwe ihe ubi;
ihe ndi ozo;
belata àgwà nke nri na-acha akwụkwọ ndụ mgbe ambrosia na-abanye n'ime ya (anụ ụlọ adịghị eri ya n'ihi obi ilu nke mmanụ dị mkpa dị na osisi).
N'ime oge okooko nke ambrosia, mgbe pollen nke osisi ahụ na-abanye na mbara igwe, ndị mmadụ na-adịkarị na allergies na-etolite pollinosis - rhinoconjunctivitis na-adịghị ahụ maka oge, nke a na-enwe ọhụụ dị ukwuu, itching na redness nke anya, dermatitis, akpịrị akpịrị, njọ nke ọnọdụ zuru ụwa ọnụ. Ihe ngosipụta kachasị njọ nke ọ bụ ọgụ nke ume na-adịghị, nsogbu nke anaphylactic. O di nwute, pollinosis anaghị adịkarị mfe - ị ghaghị izere ịkpọtụrụ ya na nje ahụ, ma ọ bụ jiri ọgwụ mgbochi ọrịa mee ihe n'oge nnukwu ọrịa ahụ iji meziwanye ọnọdụ ahụ.
N'agbanyeghị nsogbu niile ambrosia na-eme mmadụ, ọ nwekwara uru bara uru.
Ihe ize ndụ dị njọ bụ omume nke pollinosis na ụmụntakịrị bụ ndị na-ahụbeghị usoro ahụike. Ọrịa ahụ na-emetụta àgwà ndụ nke ụmụ ọhụrụ.
A na-emepụta ihe na-eme ka ọkpụkpụ pollen dị kilogram iri asaa na ise gafere. m ikuku. Otu osisi toro eto na-eweta ọtụtụ nde ndị dị otú ahụ na-emerụ ahụ kwa oge. N'elu ifufe siri ike, ha na-agbasapụ n'ebe dị anya.
Ị ma? Pollinosis bụ otu n'ime ọrịa ndị kachasị na-efe efe. Dị ka atụmatụ ọgwụgwọ si kwuo, ihe dị ka pasent 10 nke ndị bi n'ụwa na-ata ahụhụ na ya. Ọ bụ dọkịta Bekee, John Bostock, kọọrọ ọrịa ahụ na 1819. Ọ kpọrọ ya hay fever, n'ihi na o kweere na ọrịa ahụ na-akpata hay.
N'ụlọ nnabata akụkọ ihe mere eme, Ambrosia nwere ihe dị ka narị ndị iro isii bụ ndị na-ekweghị ka ọ na-eto eto ma ghọọ osisi na-edozi ahụ. N'ime ha bụ osisi ndị ọzọ na ụmụ ahụhụ. N'ebe anyị nọ, ala, ee e. Ma ebe o doro anya na ọ dị mkpa ịlụ ọgụ na ambrosia, mgbe ahụ, ọ ghaghị ime nke a site na mmadụ. E nwere ọtụtụ ụzọ isi bibie ahịhịa - agrotechnical, biological and chemical. Agrotechnical nwere ike itinye ya na mmalite mmalite nke nsị. Ọ ga-adị mkpa iji ọgwụ na kemịkal mee ihe banyere ọrịa ndị siri ike.
Mụta otú ị ga-esi kpochapụ ahịhịa ndị ahịhịa na ahịhịa.
Ọ bụrụ na ị hụ n'ubi gị ma ọ bụ n'ubi ahụ naanị ndị nnọchiteanya nke osisi a, a ghaghị iwepụ ya ozugbo. Iji mee nke a, ịnwere ike iji usoro ndị a:
Na-apụ apụ. A ghaghị iwepụta ya na mgbọrọgwụ. A ghaghị ime nke a tupu ọdịdị nke okooko osisi. Mgbe ọ dọpụsịrị, ọ dị mkpa ịtọghe ala, nke mere na mkpụrụ osisi ahụ na-eto ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha daa n'ala.
Na-egwu elu. Mgbe ị na-ahọrọ usoro a, ịkwesịrị ịdị njikere ịme ya ruo ọtụtụ afọ n'usoro iji nweta nchọta a chọrọ.
Mowing. Enwere ike ị nweta mmetụta a nanị site na ịmegharị mowing. Otú ọ dị, ịnwere ike igbanye n'oge oge budding. Mgbe mowing ahihia na oge na-eto eto na-eto, ọ ga-arụsi ọrụ ike na-etolite ọhụrụ Ome. N'ihi ya, ha ga-atụba atọ na ugboro ise kwa oge.
Ọ dị mkpa! Mgbe o wepuchara osisi ahụ, ọkụ ga-ebibi ya. Hapụ ya n'ebe a na-ewepu ya na ala.
N'ọkụkụ ndị na-emerụ emerụ, a ga-achọ ihe dị mkpa karị:
Mkpụrụ osisi ndị ọzọ na-adaghachi. Iji mee ka ọnọdụ ọjọọ na-emetụta, a na-adụ ọdụ ka ọ pụọ n'enyemaka nke osisi osisi na ahịhịa. N'ebe hayfields na ebe ịta nri, ọ dị mkpa ịkụ mkpụrụ bean na ọka na-edo ọka n'ahịrị. Mgbe afọ abụọ ma ọ bụ atọ gasịrị, ha na-enwe ike ịmepụ ambrosia kpamkpam. Iji gbochie ambrosia, ọ bara uru ịkụ alfalfa na ibé
N'ime ahihia ndị nwere ike imeju ala ahụ, ebe ha meriri ya site na ahihia, gụnyere alfalfa, mkpụrụ osisi mọstad, ọka, ihe ndị na-eme ka ọ dị mma, na-enye aka, na-azụkwa, na-enweghị atụ.
Nnyefe nke ndi iro. Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ebe ebe ambrosia na-etolite, a naghị ahụ ụmụ ahụhụ na-eri nri na osisi a, ha nwere ike ịbịaru ha. Ya mere, e nwere okwu mgbe a na-esi na China, Europe, Australia na nke mbụ Soviet Union bubata ahihia nke mkpụrụ osisi ambrosia. Taa, a na-eme nchọpụta a n'ọtụtụ ebe. Ụfọdụ n'ime ha gbalịsiri ike belata ọnụ ọgụgụ nke ambrosia ma ọ bụ mebie ya kpamkpam. Otú ọ dị, ọ kabeghịrịrị ike ikpochapụ ọtụtụ ndị bi na osisi. Kemgbe afọ 2013, nchọpụta banyere mmetụta nke akwukwo osisi na ambrosia amaliteghachiri na Russia. A na-eduzi ha na Ukraine. Na Switzerland, ha malitere ịnwale ụdị ndị ọzọ dị na North America, nakwa na-eri ahịhịa a.
Ngwa ngwa. Maka ọgwụgwọ nke nnukwu ebe eji ọgwụ mgbochi sitere na ìgwè glyphosates:
Roundup na ndị ọzọ.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mara ụdị osisi ọgwụ ndị a na-eji achịkwa ahịhịa.
A na-ahapụ ugbo ala n'okpuru uzuoku ma mesoo ya na chemicals ugboro ugboro kwa oge.
Ekwesiri icheta na iji ahihia eme ihe n'ugbo ndi ozo, na ebe ndi njem, ebe obibi nke ndi mmadu ka amachibidoro. Ya mere, n'ime obodo, nsogbu nke mbibi ambrosia ka na-emeghe. Ukraine amachibidoro ọgwụ na-adịghị mma maka ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ, nke a na-akpọ "Allergo STOP Ambrosia", nke na-emetụta ntanetị nke ogwu.
Ụzọ ọzọ ị ga - esi merie ambrosia n'obodo ukwu bụ ịkpọ ndị mmadụ ebe nile ka ha wepụ ahịhịa wee nyefee ya iji kwuo ọrụ nlekọta ndị na - eme maka nchebe ma ọ bụ ntọala maka ego.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-etinye usoro ọgwụ ahụ, ị ​​ghaghị ịkwado usoro nchedo onwe gị, chebe akụkụ akụkụ ahụ, ahụ na akụkụ nke ọhụụ. Ọ dịkwa mkpa ịgbaso ntuziaka na usoro nhazi nke ngwọta na usoro ogwu.
N'ezie, nsogbu dị mma ka ị ghara ikwe ka inyefe oge dị ukwuu, ego na mgbalị iji dozie ya. Iji gbochie nsogbu nke ala na ambrosia, ị ghaghị ịgbaso usoro mgbochi ndị a:
Hụ ntụgharị ihe atụ a tụrụ aro maka ihe ọkụkụ na ntụgharị.
Jiri nlezianya dozie ala n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge opupu ihe ubi.
Gbaa mbọ hụ na a ga-ebibi ata niile n'oge.
Na-elekọta nlekọta nke osisi a kụrụ.
Iji mepụta nchịkọta na nchekwa dị iche iche nke owuwe ihe ubi site n'ubi ndị dị ọcha na ndị a na-agbanye.
Kwụsị iji mkpụrụ nke emepụtaghi ihe.
N'ọtụtụ mba, e mepụtalarị ndị na-emepụta nchebe - nyocha nke ókèala ubi, okporo ụzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ, okporo ụzọ phytosanitary nke ngwaahịa ndị a na-achịkwa achịkwa: mkpụrụ, ọka, ngwaahịa nke nhazi ya. Ya mere, ambrosia bụ ahịhịa igbochi nke ị ghaghị ịlụ ọgụ. A na-eji osisi a eme ihe, na-agbasa ngwa ngwa ma na-emerụ emerụ na njikọ nke osisi, ala na ụmụ mmadụ. Ka ị ghara ikwe ka ahihia ndị na-emerụ ahụ banye n'ubi gị, ị ghaghị ịgbaso iwu nke nhazi ihe ọkụkụ, iji mepụta mgbochi. N'ihe banyere ambrosia kwesịrị ịmalite ozugbo o kwere omume iji wepụ ya. Ndị ọkachamara na-ekwu na mbibi nke ahihia ga-ekwe omume naanị site na ijikọta mgbalị niile na ntinye ngwa ngwa nke ọtụtụ ụzọ nchịkwa.
Mara mma mbubreyo piom na nnukwu mkpụrụ - dịgasị iche iche "Voloshka"
Ezé nke ehi: olee otú ha si dị, enwere elu, gịnị mere ha ji daa
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu ka ambrosia si yie na ihe dị njọ?